Kuqondiswe ngu Garry Marshall seziqalile emhlabeni ukuze indaba rending inhliziyo-of uthando lweqiniso, kwagqashuka phakathi isicebi futhi isifebe, ngelinye ilanga banquma ifilimu inoveli by Meg Cabot ngaphansi kwesihloko esithi ethembisa "Princess Diaries." Ngakho kwakukhona romantic comedy "Princess Diaries" (abadlali: E. Hathaway, D. Andrews, G. Elizondo, uH Matarazzo, M. Moore), esikhuluma ngokubutha okuyokwenzeka ukuzidela yaseMelika ingane Mia inyumbazane, umuntu owayezizwele ukuthi Princess of Genovia - Minonetta Amelia Grimaldi Thermopolis Renaldo.
ekuqaleni Tale of ngekhulu xxi
Ngakho, ngenxa yemizamo inyunyana okudala abalobi Gina Vendkos futhi Meg Cabot futhi umqondisi Garry Marshall, ngo-2001, ngabona ukukhanya omunye emenza athandeke kunazo inhliziyo "A Cinderella Story", okuyinto ngaphansi amandla ukuphazamisa umbukeli isimiso nsuku zonke futhi baphathe kuhlanganise endaweni extravaganza lwasemaphusheni. Le filimu "Princess Diaries" umkhiqizo ekahle Dream Factory.
Ngokuhamba komlando waso, Hollywood ifilimu umkhakha ngokuphelele yingcweti ehlukahlukene (Amaningi awo futhi yasungulwa). Ngisho ngokungazi ekufuneni "inzuzo yokuncintisana", umbukeli uyaqaphela ukuthi omunye kakhulu kwafunwa futhi ethandwa, baye sezenziwe zaphelela ku Hollywood namuhla le romantic comedy uhlobo. It Ubuye wokwehlayo ayo, it is hhayi indawo yokugcina kuhlala okubizwa ngokuthi "ifilimu-ushintsho." inombolo enjalo omkhulu films - kusuka "My Big Fat Wedding ngesiGreki," "Yena Zonke That" ukuthi "Ubuhle" eshiwo ngenhla. Ngokusobala, uphrojusa trio ifilimu (Debra Martin Cheyz, Mario Iskovich, Uitni Hyuston) ngesikhathi ukuqaphela ukuthi lesi sakhiwo lelandzisako i izindlela ezinhle kakhulu amehlo ikakhulukazi izilaleli zesifazane. Futhi akuwona ukujika ezinjalo izenzakalo, iphupho zonke isibukeli yesibili ehleli ehholo cinema? Ngakho-ke, ifilimu "Princess Diaries" nakanjani yimpumelelo runaway kanye ukukhiqizwa enye inkondlo elama.
Esiqintini ifilimu "Princess Diaries", abadlali engenhla, acoce indzaba okwakuthandeka umlingisi losemcoka, Mia. Girl iphuzu elithile bekulokhu evamile umfana oneminyaka engu-15 ubudala, ngempela singumuntu ongazethembi, kunothile izindawo. Wayehlala e-San Francisco, waya esikoleni ngasese wafuna ukunakwa ethandwa kakhulu futhi muhle umfana Josh esikoleni. Hhayi bancishwa zesifazane ukunakwa yomfana Yiqiniso, lokho awuboni the "grey igundane" hlala ukulangazelela kwakhe. Kodwa ngolunye usuku ukuphila kwakhe izinguquko ezinkulu edolobheni kuziwa ugogo protagonist futhi inikeza izindaba zakhe emangalisa - kuvela ukuthi uyise - isikhulu yemifino European Genovia. Futhi ke kwafika isikhathi lapho Princess Mia has ukubuyela izikhonzi zakhe futhi anyukele sobukhosi. Kodwa inkinga ukuthi intombazane ibukeka impela lemukelekako ngempela engayazi nemithetho yokuziphatha enkantolo. Ugogo uthembisa ngokushesha zokulungisa isimo, noMia ekugcineni uzokwenza isinqumo esinzima. Ngakho, kancane, ngaphandle spoiler ungakwazi ukutshela lwendaba of Umdwebo "Princess Diaries." Abalingisi, bezithombe, setha abaklami - wonke nezisebenzi egubha emkhathini ekhethekile evumayo linqoba ngesikhathi kwenzeka lesi sigameko sokudubula.
Inzuzo elingenakuphikwa lokhu comedy romantic iwukuhlanganyela ukuthwetshulwa Dzhuli Endryus. Kwakumnandi kakhulu ukubona esikrinini. Isibukeli ujwayelene "Victor / Victoria" actress ku ifilimu (1982), "Uthando Beautiful" (1992), "Blue Bloods" (2000) nokunye. D. Nokho, yilo lodwa akunakwenzeka ukuba bakwazi ukudweba isithombe, uma kungekhona ukuthi umculi we main nendima female. Omunye lo mlingisi amahle kunawo Hollywood, inkanyezi ophambili, actress abanamakhono Enn Heteuey. Nanguya amakhono akhe oyibamba ungase unezele engasenathonya nombala umlingiswa oyinhloko. Ukuthuthukiswa uhlamvu wakhe uhambe ngalé ujabule. Isihloko salokhu wayeyisazi uhlelo yesibili kwakunguDodayi ongenakulibaleka Hector Elizondo ( "Izinhliziyo Borrowed," "Pretty Woman"), umlingiswa wakhe zaphumela sikhumbuleke futhi akunika engapheli omuhle. isithombe elondolozwe adalwe Hizer Mataratstso ( "Blue Moon," "Scream 3") futhi Sandra Oh ( "Last Night"). Lokhu umlingisi has ngokunyakaza isithombe ekubunjweni "Princess Diaries" waphonsa njengenye wazibonakalisa ukubaluleka kwako e professional ensimini.
Isikhalazo kuphela kungaba izilaleli ngemva kokubuka le movie izihloko otolika. Le nguqulo yokuqala - "Princess Diaries" - a heartier kakhulu elungile ngaphezulu, ngoba sakubhuqa moviegoers nomqondo kukhona lula kakhulu ukuba aphathe umbuzo kuthiweni e isihloko ifilimu: "Princess Diaries" - 'Yibani kagogo - Queen "! Sekukonke, movie Kwatholakala a ukuzikhohlisa kancane, ligxile nezithameli ethize (lamantombazane asemasha, amantombazane asemancane, cute wekhaya, amaphupho ekutholeni uthando ephelele, njengoba kwenziwa e-movie ngasese, kuyinto efiselekayo ukwenza isikhulu "op" emlenzeni ngesikhathi kiss lokuqala).
Amafilimu mayelana asemanzini ukuthi bayakufanelekela kokubona
Loan Umthengi nge ongaphakeme senzalo. ukubolekisa Umthengi Savings Bank ne ongaphakeme zenzalo
Indlela ukuqeda amaphela ehostela ngokushesha futhi unomphela?
U-Ilya Vladimirovich Tsymbalar: biography, umsebenzi